पशुपतिमा तीजको रमझम, हेर्नुहोस् १२ तस्विर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पशुपतिमा तीजको रमझम, हेर्नुहोस् १२ तस्विर
काठमाडौँ। भाद्र शुक्ल तृतीया अर्थात् हरितालिका (तीज) पर्वका दिन लाखौँ भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन एवं पूजा गरे।
बिहान तीन बजेदेखि नै पशुपतिका चारै ढोका खोली भक्तजन प्रवेश गराइएको थियो।
यस वर्ष लाम व्यवस्थित भएकाले चक्रपथको तिलगङ्गा–गौशाला–चावहिल मार्ग सवारी चलिरहेको छ। यसले गर्दा भक्तजनलाई आवतजावत गर्न सहज भएको कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिए।
दर्शन गरेका महिलाले पशुपति क्षेत्रमा तीजका गीत गाई नृत्य प्रस्तुत गरेका छन्। महिलाको विशेष उपस्थिति थियो। रातो, हरियो र पहेँलो पहिरनमा सजिएका महिलाको पशुपति परिसरमा भीड नै लागेको थियो।